Ithegi: ukukhwaza isele | Martech Zone
Maka: ukhwaza isele
NgoLwesithathu, ngoFebruwari 24, 2021 NgoLwesibini, Agasti 24, 2021 Douglas Karr
Sinceda umxhasi weshishini ngoku ngokufezekisa indawo entsha ye-WordPress. Ziindawo ezininzi, ishishini leelwimi ezininzi kwaye babe neziphumo ezibi malunga nokukhangela kule minyaka idlulileyo. Xa sasicwangcisa indawo yabo entsha, safumanisa imiba embalwa: Oovimba abagcina izinto zakudala-babenendawo ezininzi kule minyaka ilishumi idlulileyo ngumahluko obonakalayo kubume be-URL yendawo yabo. Xa sivavanya ikhonkco elidala lephepha, zazingama-404 kwindawo yazo yamva nje.
Ungakhasa njani kwindawo enkulu kwaye ukhuphe idatha usebenzisa ukukhwaza iFrog's SEO Spider
NgoLwesibini, Novemba 17, 2020 NgoLwesibini, Novemba 17, 2020 Douglas Karr
Sinceda abathengi abaliqela ngoku ngokufuduka kukaMarketo. Njengokuba iinkampani ezinkulu zisebenzisa izisombululo zeshishini ezinje, ifana nesigcawu esizifaka kwiinkqubo kunye namaqonga ngaphezu kweminyaka… kude kube kwinqanaba lokuba iinkampani zingazi ndawo zonke zokuchukumisa. Ngeqonga lokuthengisa ngokuzenzekelayo njengoMarketo, iifom yindawo yokungena kwedatha kwiindawo kunye namaphepha okufika. Iinkampani zihlala zinamawaka amaphepha kunye namakhulu eefom kwiindawo zazo
Imicimbi emi-5 yeCritical SEO ifunyenwe ngeFog ekhwaza
NgoMvulo, Meyi 6, 2013 NgoLwesihlanu, Agasti 30, 2013 Douglas Karr
Ngaba ukhe warhubuluza indawo yakho? Isicwangciso esiliqili sokulungisa imicimbi engacacanga kwindawo yakho onokuthi ungayiboni. Abahlobo abalungileyo kwiiQhinga leSiza basixelele malunga nokuKhwaza kweFrog's SEO Spider. Yinto elula yokukhasa esimahla nesithintelo samaphepha angaphakathi angama-500… ngokwaneleyo kwiiwebhusayithi ezininzi. Ukuba ufuna ngaphezulu, thenga i- £ 99 yelayisensi yonyaka! Ndiyayixabisa kakhulu indlela endinokuyijonga ngokukhawuleza ngayo indawo kwaye